SAWIRRO: Wasiir Beyle oo shir muhiim u ah Soomaaliya uga qeyb galay magaalaada Qaahira | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA SAWIRRO: Wasiir Beyle oo shir muhiim u ah Soomaaliya uga qeyb galay...
SAWIRRO: Wasiir Beyle oo shir muhiim u ah Soomaaliya uga qeyb galay magaalaada Qaahira
Wasiirka Maaliyadda Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Cabdiraxmaan Ducaale Beyleayaa xarunta Jaamacadda Carabta ee Qaahira uga qeyb galay shir saddax geesoodah oo looga hadlayay sidii deymaha looga cafin lahaa Soomaaliya kaas oo la soogaba-gabeeyay.
WasiirCabdiraxmaan Ducaale Beyle iyo Wafdigiisa ayaa kulamo aan kala go’ laheyn laqaatay, Wafuud ka kala socotay Xoghaynta Jaamacadda Carabta, Ururyo Carbeed iyoSanduuqa Horumarinta Carabta, waxaana kulamadan diiradda lagu saaray sidii Soomaaliya looga cafin lahaa deymaha Dibadda looga leeyahay.
“Waxaanoo soo gaba gaboobay shirkii Jaamacadda Carabta oo ka dhacay Magaalada Qaahiroee Dalka Masar. Waxaan ku faraxsanahay sida ay uga go’antahay wadamada Jaamacadda Carabta in ay Soomaaliya ka taageeraan horumarinta dhaqaalaha.”ayuu yiri Wasiirka Maaliyadda XFS
Sidookale Wasiirka ayaa la kulmay Xoghayaha Guud ee Ururka Jaamacadda Carabta Digtoor Ahmed Abu Kheyd, isagoona kala hadlay sidii codsiga deyn cafinta ee
Dowladda Soomaaliya loogu dari lahaa Ajandaha Shirka soo socda ee la qabanayobisha foodda inagu soo haysa.
DigtoorAhmed Abu Kheyd Xoghayaha Guud ee Ururka Jaamacadda Carabta aya aqbalay dalabkaWasiirka, isagoona Bogaadiyay Horumarada iyo Isbedelada ay dalka kuhoggaamiyeen Madaxweyne Farmaajo iyo Ra’iisul wasaare Kheyre iyo sida DowladaSoomaaliya ay kaga go’an tahay dowladda in laga cafiyo deymaha lagu leeyahay.Mowduucyadala xiriira.